Ny Tononkira Fanaperana na Tononkiran' i Sôlômôna na Tononkira dia Tononkira dia boky ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Taloha izay mitantara ny resaka ifanaovan' ny mpifankatia mifampitaona sy mifaneho ny fitiavany sy ny faniriany. Tantara an' ohatra ny amin' ny fitiavan' Andriamanitra ny vahoakany izany ho an' ny Jiosy sy ny Kristiana.
3.1 Ny fiaraisam-po eo amin' ireo mpifankatia (1.1 -- 2.7)
Ny hoe Tononkiran' i Solomona dia teny malagasy andikana ny teny grika hoe ᾎσμα ᾈσμάτων / Aisma Aismátôn sy ny teny hebreo hoe שיר השירים / Shir ha-Shirim ao amin' ny Baiboly prôtestanta. Tsy dikan-teny ara-bakiteny izany. Ny hoe Tononkira dia Tononkira no manakaiky indrindra ny anaran' ny boky amin' ny teny hebreo. Ny hoe Shir ha-Shirim dia enti-milaza ny hatsarana fara-tapony ananan' ilay tononkira (shir), "tononkira tsara indrindra" no azo andikana izany. Tononkiran' i Solomona no iantsoana ilay boky ao amin' ny Baiboly prôtestanta fa Tononkira dia Tononkira na Tononkira Fanaperana kosa ao amin' ny Baiboly katolika.
Fanangonana tonon-kira sy tonon-kalo ny Bokin' ny Tononkira Fanaperana izay mampiresaka lehilahy iray sy vehivavy iray ny amin' ny fifankatiavan' izy ireo. Indraindray izy roa dia mifamaly resaka fa indraindray koa dia miresaka amin' ny namany avy ka mahatsiahy ny fifandraisany sy ny fisakaizany.
I Sôlômôna, hoy ny sasany, io lehilahy miteny io.
Nentina teo an-dapan' i Sôlômôna ilay vehivavy nefa efa raiki-pitia tamin' olon-kafa izay tafakambana aminy ihany tamin' ny farany.
Mety nampiasaina tamin' ny fotoana ankalazana fanambadiana teo amin' ny Israelita tany aloha ireo tonon-kira na tonon-kalo ireo, raha tsy nanana heviny teôlôjika.
Ilay lehilahy sy ilay vehivavy dia sarin' Andriamanitra sy ny Vahoakany (ny Kristiana dia mampitaha ilay lehilahy sy ilay vehivavy amin' i Kristy sy ny Fiangonana).
- Ny fiaraisam-po eo amin' ireo mpifankatia (1.1 -- 2.7)
Ny fiaraisam-po eo amin' ireo mpifankatia (1.1 -- 2.7)Hanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tononkira_Fanaperana&oldid=1041855"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 02:29
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 02:29 ity pejy ity.